China SPC Ft JD-061 rụpụta na Factory | N'akụkụ
SPC floor nwere njirimara nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gburugburu ebe obibi-enyi na enyi na-agbanwe agbanwe, dị mfe ihicha ma jiri, yana ogologo ndụ ọrụ. Ọ na-eji ntụ marble sitere na etolite ntọala siri ike yana njupụta dị elu na nnukwu eriri netwọkụ, nke a na-edozi site na ọtụtụ puku usoro.
Etu esi edobe SPC floor?
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ahịa ahụ kwadoro ụlọ SPC. Isi ihe kpatara ya bụ na ọ nwere ezigbo arụmọrụ. Ọ na-eji SPC base ihe maka extrusion, wee jiri PVC na-eyi akwa oyi akwa, PVC ihe nkiri agba na SPC base material maka otu oge kpo oku, laminating na embossing. Ọ bụ ngwaahịa na-enweghị gluu.
Mana ọtụtụ ndị ọrụ anaghị ege ntị na ndozi nke SPC ala mgbe ha zụrụ ya n'ụlọ, nke na-ebelata ndụ nke ala. Nke a abaghị uru funahụrụ ya. Nke a bụ nkọwa dị mkpirikpi nke ihe ọmụma mmezi nke ala SPC.
1 Na-ehicha ala mgbe niile iji mee ka ọ kpọọ nkụ ma maa mma
Ejila ngwaahịa nhicha na-eme ka ala dị larịị
3 Mgbe ị na-azọ ụkwụ, dobe ụzọ mgbochi roba na-abụghị mpụga ọnụ ụzọ ka ị banye nsị na ụkwụ ụkwụ
4 Ejila ngwaahịa dị nkọ ịkọcha ala, nke nwere ike imebi agba agba nke ala
Anyị niile na-agbaso usoro iwu azụmahịa nke "gbasara ndị ahịa dị ka ndụ, na-ewere ogo dị ka ntọala, ma na-achọ mmepe site na ọhụụ"; anyị kwenyere n'usoro omume azụmaahịa nke "eziokwu na-adabere"; anyị na-anọgidesi ike na nkwenye nke "ịchụso izu oke na ịdị elu nke ndị ahịa". Anyị na-elebara ụlọ ọrụ anya nke ọma wee tọọ ntọala siri ike maka mmepe; anyị na-amụ ihe mgbe niile, nyocha ma banye na teknụzụ ọhụrụ iji gbalịsie ike maka ngwaahịa dị elu; anyị na-amụ anya mgbe niile ma ghara ileghara njikọ ọ bụla anya na njirimara dị mma.
Nke gara aga: SPC Ft JD-060
Osote: SPC Ft JD-062
SPC Ft JD-068
SPC Ft JD-067
SPC Ft JD-065